သတ်မှတ်ချက်များ & ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ | mobilecasinofreebonus.com |
နေအိမ် » အဆိုပါဖုန်းကာစီနိုဘီလ် & မိုဘိုင်း slot အထူးနှုန်းများ£ 20, £ 10, £ 100 က, 1000 ရဲ့အခမဲ့£! » သတ်မှတ်ချက်များ & ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ | mobilecasinofreebonus.com
သုံးစွဲမှုကျဘျဆိုကျစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ & ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
ဒီက web site ကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်, သငျသညျကိုအသုံးပြုခြင်းဒီ web site ကိုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူကြပါတယ်, အားလုံးတည်ဆဲဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ, သငျတို့သမဆိုသက်ဆိုင်ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်လိုက်နာမှုများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်ကြောင်းသဘောတူ. သင်တို့သည်ဤဝေါဟာရများကိုမဆိုနှင့်အတူသဘောမတူဘူးဆိုရငျ, သင်ဤ site ကိုသုံးခြင်းသို့မဟုတ်ကြည့်ရှုခြင်းမှပိတ်ပင်တားမြစ်သည်. ဤဝတ်ဆိုဒ်တွင်တွင်ပါရှိသောအဆိုပါပစ္စည်းများသက်ဆိုင်သောမူပိုင်ခွင့်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးအမှတ်အသားဥပဒေဖြင့်ကာကွယ်ထားပါသည်.
2. License ကိုသုံးပါ
ခွင့်ပြုချက်ယာယီပစ္စည်းများတဦးမိတ္တူကို download လုပ်ပါမှခွင့်ပြုခဲ့သည် (သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ် software ကို) ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဘို့အ MobileCasinoFreeBonus.com ရဲ့ web site ကိုအပေါ်, သာကြည့်ရှုသည် non-စီးပွားဖြစ်ကူးပြောင်းရေးကာလ. ဒါကလိုင်စင်များ၏ထောက်ပံ့ကြေးဖြစ်ပါသည်, ခေါင်းစဉ်မလွှဲပြောင်း, နှင့်ဤလိုင်စင်အောက်တွင်သင်သည်မပြုစေခြင်းငှါ:
မည်သည့်စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပစ္စည်းများကိုသုံး, သို့မဟုတ်မည်သည့်အများပြည်သူ display ကိုများအတွက် (စီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ် Non-စီးပွားဖြစ်);
decompile သို့မဟုတ် MobileCasinoFreeBonus.com ရဲ့ web site ကိုအပေါ်ပါရှိသောမည်သည့် software ကို engineer reverse ဖို့ကြိုးပမ်း;
ထိုပစ္စည်းများမှမည်သည့်မူပိုင်ခွင့်များသို့မဟုတ်အခြားစီးပွားဖြစ် notation ကိုဖယ်ရှား; သို့မဟုတ်
အခြားသူတစ်ဦးမှပစ္စည်းများလွှဲပြောင်းသို့မဟုတ် “ကြည့်မှန်” အခြားမည်သည့် server ကိုအပေါ်ပစ္စည်းများ.
သင်တို့သည်ဤကန့်သတ်မဆိုချိုးဖောက်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင် MobileCasinoFreeBonus.com အားဖြင့်ရပ်ဆိုင်းစေခြင်းငှါ အကယ်. ဒီလိုင်စင်ကိုအလိုအလျောက်ရပ်ဆိုင်းရကြလိမ့်မည်. ဤသူပစ္စည်းကိုသင့်ကြည့်ရှုရပ်စဲအပေါ်သို့သို့မဟုတ်ဤလိုင်စင်များ၏ရပ်စဲအပေါ်သို့, သင်သည်သင်၏အပိုင်ထဲမှာရှိမရှိအီလက်ထရောနစ်သို့မဟုတ်ပုံနှိပ် format နဲ့မဆိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပစ္စည်းများဖျက်ဆီးရမည်.
MobileCasinoFreeBonus.com ရဲ့ web site ကိုအပေါ်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးနေကြတယ် “သည်အဖြစ်”. MobileCasinoFreeBonus.com မျှအာမခံစေသည်, ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသို့မဟုတ်ဆိုလို, နှင့်ဤဥပဒေဖြင့်အားလုံးအခြားအာမခံ disclaims နှင့် negates, ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအပါအဝင်, ကုန်သည်ဆိုလိုအာမခံသို့မဟုတ်အခွအေန, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကြံ့ခိုင်ရေး, ပညာတတ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၏ Non-ချိုးဖောက်မှုသို့မဟုတ်အခွင့်အရေးအခြားချိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်. နောက်ထပ်, MobileCasinoFreeBonus.com တိကျမှန်ကန်မှုကိုရည်မှတ်မည်သည့်ကိုယ်စားပြုမှုခိုင်လုံသို့မဟုတ်လုပ်မထားဘူး, ဖွယ်ရှိရလဒ်များကို, ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းများများအသုံးပြုခြင်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုက၎င်း၏အင်တာနက်ကိုကို web site ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများမှဒါမှမဟုတ်ဒီဆိုက်ဆက်စပ်မှုမည်သည့်ဆိုဒ်များအပေါ်သက်ဆိုင်သော.
အဘယ်သူမျှမအဖြစ်အပျက်အတွက် MobileCasinoFreeBonus.com သို့မဟုတ်ယင်း၏ပေးသွင်းဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည် (အပါအဝင်, ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, ဒေတာသို့မဟုတ်အမြတ်အစွန်းများဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, သို့မဟုတ်မှုကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြတ်တောက်ရန်,) MobileCasinoFreeBonus.com ရဲ့အင်တာနက် site ပေါ်တွင်ပစ္စည်းများကိုသုံးစွဲဖို့ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းထဲကပေါ်ထွက်လာသော, MobileCasinoFreeBonus.com သို့မဟုတ်တစ် MobileCasinoFreeBonus.com ခွင့်အာဏာကိုယ်စားလှယ်နှုတ်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောပျက်စီးမှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ၏အရေးအသားအတွက်အကြောင်းကြားထားပြီးလျှင်ပင်. အချို့သောတရားစီရင်မှုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောအာမခံအပေါ်ကန့်သတ်ခွင့်ပြုပါဘူးသောကြောင့်, လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်ဖွစျပှားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်ယူမှု၏သို့မဟုတ်ကန့်သတ်, ဤအကန့်သတ်မှုသည်သင်လျှောက်ထားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ.
5. တည်းဖြတ်မူများကိုနှင့် Errata
MobileCasinoFreeBonus.com ရဲ့ web site ကိုအပေါ်ပေါ်ထွန်းအဆိုပါပစ္စည်းများနည်းပညာဆိုင်ရာပါဝင်နိုင်, အပွငျအဆငျ, သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံပြပွဲအမှားများ. MobileCasinoFreeBonus.com သူ့ရဲ့ web site ကိုအပေါ်ပစ္စည်းများမဆိုတိကျမှန်ကန်ဖ​​ြစ်ကြောင်းခိုင်လုံပါဘူး, ပြည့်စုံသော, သို့မဟုတ်လက်ရှိ. MobileCasinoFreeBonus.com အသိပေးစာမပါဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်၎င်း၏ဝဘ် site ပေါ်တွင်ပါရှိသောပစ္စည်းများမှစသောအပြောင်းအလဲလုပ်တတ်မည်အကြောင်း. MobileCasinoFreeBonus.com မ, သို့သော်, ထိုပစ္စည်းများပြုပြင်မွမ်းမံရန်မည်သည့်ကတိကဝတ်ကိုလုပ်.
6. links များ
MobileCasinoFreeBonus.com က၎င်း၏အင်တာနက်ကိုကို web site ကိုမှဆက်နွယ်နေသည့်ဆိုဒ်များအားလုံးပြန်လည်သုံးသပ်မနှင့်မဆိုဤကဲ့သို့သောနှင့်ဆက်စပ်ဆိုက်ရဲ့ contents များအတွက်တာဝန်မယူထားပါတယ်. မည်သည့်လင့်ခ်များထည့်သွင်းဆိုက်၏ MobileCasinoFreeBonus.com အားဖြင့်ထောက်ခံချက်ဆိုလိုပါဘူး. မည်သည့်ထိုကဲ့သို့နှင့်ဆက်စပ် web site ကိုအသုံးပြုခြင်းအသုံးပြုသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ပါတယ်.
MobileCasinoFreeBonus.com အသိပေးစာမပါဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်၎င်း၏ web site ကိုအသုံးပြုဤဝေါဟာရများကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်စေခြင်းငှါ. ဒီက web site ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်သည်အသုံးပြုမှုဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ထို့နောက်လက်ရှိဗားရှင်းအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူကြပါတယ်.
MobileCasinoFreeBonus.com ရဲ့ web site ကိုမှစပ်လျဉ်းသည့်အခြေအနေမဆိုပြောဆိုချက်ကိုပညတ်တရားတော်ကိုပြဋ္ဌာန်းချက်၎င်း၏ပဋိပက္ခနှင့် ပတ်သက်. မပါဘဲလန်ဒန်နိုင်ငံတော်၏ဥပဒေများအားဖြင့်အုပ်ချုပ်ခံရကြလိမ့်မည်.